रोचक Archives - S Khabar
अनुसन्धाने भन्छ पहिलो सन्तान जस्तो बोद्धिक अरु हुँदैनन् !
खुट्टाको औलाबाट यसरी थाहा हुन्छ मानिसको स्वभाव
सपनामा माउसुली देख्नु खतराको संकेत, मरेको मानिस देख्दा फाइदा !
प्रेममा इमान्दार हुन्छन् यस्ता युवती, छोड्दैनन् पार्टनरको हात
सत्य साई धेरै अनुयायीहरू भएका धर्मगुरु हुन। यी धर्मगुरु बास्तबिक नाम सत्यनारायण राजु हो । उनी आफूलाई शिरडि साइको अबतार मान्छन्। पुट्टपर्तिको मजदुरी गरेर घर चलाउने एउटा गरीब परिवारमा सन् १९२६ नोभेम्बर २३ मा उनका जन्म भएको थियो। परिवारका…
नाकले पत्ता लगाउन सकिन्छ लिंगको आकार
एजेन्सी, पुरुषहरुको लिंग प्राय बाङ्गो, टेडो, पातलो, मोटो आदि विभन्न प्रकारको हुन सक्छ । अनुसन्धान कर्ताका अनुसार लिंगको आकारले यौन आनन्दमा त्यति प्रभाब पार्दैन । तथापि धेरै सेलिब्रेटीहरु भन्ने गर्छन,यौन आनन्द प्राप्त गर्नका निम्ती आफुलाई…
एजेन्सी, श्रीमानल र श्रीमती वीचको माया, प्रेम जो कोहिले बुझ्न सक्दैनन् । सम्बन्ध र विश्वास उनीहरु वीचको वास्तविकता पनि यहि नै हो । यस अर्थमा जीवनको यात्रा अगाडी बढाउनका निमित्त एक अर्कामा विश्वास र माया हुनु जरुरि छ । धेरै श्रीमानले आफ्नी…
महात्मा गान्धीको खास नाम मोहनदास करमचन्द गान्धी हो । उनलाई भारतीय राजनीतिक पुरुष तथ भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नायक मानिन्छ । गान्धी सन् १८६९ अक्टोबर २ का दिन भारत को गुजरात प्रान्तको पोरबन्दर भन्ने ठाउँमा जन्मिएका थिए । सत्य, अहिंसा र…
भनिन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ तर सधैं होइन । धेरैजसो अवस्थामा व्यक्ति प्रेममा परेपछि पनि आफ्नो जिम्मेवारी र परिवारलाई छोड्न सक्दैनन् । एक महिलाले आफ्नो यस्तै कहानी ‘द गार्जियन’ सँग सेयर गरेकी छिन् । एक विवाहित व्यक्तिकी प्रेमिकाले उनकी…
भनिन्छ माया प्रेम अन्धो हुन्छ भनेर त्यस्तै एउटा घटना बाहिर आएको छ। फेसबुकको माध्याम बाट लभ गरेर अनुहारनै नहेरी बिहे गर्न लाग्दा यस्तो घटना हुन पुगेको छ । बिज्ञान र प्रविधिको युगमा बिकाश संगसंगै यसको बिकृति पनि समजामा देख्न सकिन्छ । अनेक…
युवतीले तपाईंलाई मन पराउँछिन कि पराउँदिनन् भनेर यसरी थाहा पाउनुहोस
धेरैजसो पुरुषहरु महिलाको भावना बुझ्न निकै कठिन हुने बताउँछन् । यसो हुँदाहुँदै पनि माया प्रेममा रहेकाहरु भने एकअर्का प्रति नजिक हुन विभिन्न लक्षण र प्रतिक्रियाहरु व्यक्त गर्ने गर्छन् । तर, युवतीहरू पुरुषप्रति सजिलै र सिधा रुपमा प्रेमको…
अचम्म ! एक बोतल पानीकै पर्छ १ करोड
भनिन्छ पानी जिन्दगानी । हुन पनि संसारका सवै जीवलाई बाँच्नका लागि पानी आवश्यक पर्छ । संसारमा पानीका विषयमा अनेकौं अनुसन्धानहरु भएका छन् । मानिसको दैनिक जीवनमा पानीको नभइ नहुने पदार्थ हो । यही पानी एक बोतलको एक करोड रुपैयाँ पर्छ भन्दा…
हाँस्ने शैलीले थाहा हुन्छ तपाईंको स्वभाव
भनिन्छ जो हाँस्छ उहि बढी बाँच्छ । चिकित्सकबाट नै प्रमाणित कुरा हो हास्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । हाँसो भनेको एक प्रकारको औषधि नै जसका धेरै फाइदा छन् । समान्यतया: व्यक्ति अनुसार, हाँसो पनि फरक फरक हुन्छ । कोही हाँस्दा मुसुक्क…